अय्यूब 22 ERV-NE - एलीपजले जवाफ - Bible Gateway
अय्यूब 22 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
एलीपजले जवाफ दिन्छ
22 तेमानीबाट आएका एलीपजले जवाफ दिए;
2 “के परमेश्वरलाई हाम्रो सहायता चाहिन्छ? अँहँ।
ज्ञानी पुरूष पनि परमेश्वरलाई साँच्चि नै कामलाग्ने होइन।
3 यदि तिमी धर्मी छौ भने के यसले परमेश्वरलाई मद्दत पुर्याउँछ? अँहँ!
यदि तिम्रो मार्गहरू सही छन् भने के सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई केही लाभ हुन्छ? अँहँ।
4 अय्यूब, किन परमेश्वरले तिमीलाई दण्ड र दोष दिनुभयो?
के यो तिमी उहाँको डर बोक्छौ भनेर हो?”
5 होइन, यो तिम्रो धैरे दुष्टकर्महरूको कारणले हो।
अय्यूब, तिमीले कहिल्यै तिम्रो दुष्टकर्म रोकेनौ।
6 हुन सक्छ तिमीले दाज्यू-भाइ देखि रूपियाँ पैसा ऋण लिएका छौ,
अनि तिमीलाई उसले केही देओस् भनेर बाध्य गर्यौ जसले त्यो फर्काइने प्रमाण गर्यो।
हुन सक्छ तिमीले गरीब मानिसबाट बन्धक राखे जस्तै लुगा लिएको थियो।
हुन सक्छ कुनै कारणै बिना तिमीले त्यो गर्यौ।
7 हुन सक्छ तिमीले ती थकित
र भोकोहरूलाई पानी र भोजन दिएनौ।
8 अय्यूब, तिमीसँग खेती गर्ने थुप्रै जमीनहरू छन्।
अनि मानिसहरूले तिमीलाई आदर गर्छन्।
9 हुन सक्छ तिमीले केही पनि नदिइकन विधवाहरूलाई टाढा पठायौ।
अय्यूब, हुन सक्छ तिमीले टुहुरा-टुहुरीहरूलाई धोका दियौ।
10 यसकारण तिम्रो वरिपरि पासै-पासो छन्
अनि नसोचेको दुःखले तिमीलाई भयभीत पार्दछ।
11 यसैले गर्दा यो अत्यन्त अन्धकार छ तिमी देख्न सक्तैनौ,
अनि बाढीले तिमीलाई बगाउँछ।
12 “परमेश्वर स्वर्गको उच्च तहमा बस्नुहुन्छ।
हेर ताराहरू कतिमाथि छन्।
परमेश्वरले उच्च ताराहरूबाट तल हेर्नु हुन्छ।
13 तर अय्यूब तिमीले भन्न सक्छौ, ‘परमेश्वरले के जान्नु हुन्छ?
के परमेश्वरले कालो बादलहरूबाट देख्न सक्नुहुन्छ अनि हामीलाई न्याय गर्नुहुन्छ?
14 बाक्लो बादलले उहाँलाई हामीदेखि लुकाउँछ,
यसैले जब उहाँ आकाशको उच्च भागमा हिँड्नु हुन्छ,
माथि आकाशबाट उहाँले हामीलाई देख्नु हँदैन।’
15 “अय्यूब जुन बाटोमा दुष्ट मानिसहरू हिँडिसकेका थिए,
तिमी त्यही पुरानो बाटोमा हिंडिरहेछौ।
16 ती दुष्टहरू नष्ट भए
तिनीहरू मृत्युको मुखमा पुग्नु अघि नै तिनीहरूलाई बाढीले बगाएर लग्यो।
17 ती मानिसहरूले परमेश्वरलाई भने, ‘हामीलाई एक्लै छाडी दिनुहोस्,
सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हामीलाई केही पनि गर्न सक्नु हुन्न।’
18 उहाँ नै परमेश्वर, जसले आफ्ना घरहरू असल कुराहरूले भर्नु भयो।
अँहँ, म दुष्ट मानिसहरूका सल्लाहको पछि लाग्दिनँ।
19 धर्मी मानिसहरूले तिनीहरूलाई विनाश भएको देख्छन,
अनि ती धर्मी मानिसहरू खुशी हुनेछन।
निर्दोष मानिसहरू ती दुष्ट मानिसहरूमाथि हाँस्दछन्।
20 ‘साँच्चि नै हाम्रा शत्रुहरू नाश भए।
आगोले तिनीहरूका सम्पत्ति खरानी बनाई दियोस्।’
21 “अब, अय्यूब, तिमी स्वयंलाई परमेश्वर कहाँ समर्पण गर अनि उहाँसँग शान्तिले बस।
त्यसो गर, अनि तिमीले धेरै असल कुराहरू पाउँनेछौ।
22 उहाँबाट शिक्षा लेऊ।
उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यसमा ध्यान देऊ।
23 अय्यूब, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तर्फ फर्की आऊ, अनि तिमी पुनःर्स्थापित हुनेछौ
तर अहिले तिमीले आफ्नो घरबाट दुष्ट-आत्मालाई खेदी हाल।
24 सोंच, तिम्रो जति सुनहरूछन् तर ती धुलो हुन्
अति उत्तम सुन खोलाका स-साना ढुङ्गाहरू जस्ता।
26 तब सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा तिमी आनन्दित हुन सक्छौ।
तब तिमी परमेश्वरलाई माथि हेर्नैछौ।
27 तिमीले उहाँलाई प्रार्थना गर्नेछौ अनि उहाँले तिम्रो प्रार्थना सुन्नु हुनेछ।
अनि तिमीले आफ्ना वचनहरू पूर्ण गर्नेछौ।
28 यदि तिमीले केही गर्छु भनेर निर्णय लिएका छौ भने त्यो सफलता पूर्वक हुनेछ
अनि तिम्रो भविष्य निश्चय उज्जवल हुनेछ।
29 परमेश्वरले घमण्डी मानिसहरूलाई लज्जित पार्नुहुन्छ।
तर परमेश्वरले विनम्र मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ।
30 तब तिमी ती मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौ जसले गल्ती कामहरू गर्छन्।
तिमीले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नेछौ
अनि उहाँले ती मानिसहरूलाई क्षमा गरिदिनु हुनेछ।
किनभने तिमी एकदमै पवित्र हुनेछौ।”